मत्ती २५ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२५ “स्वर्गको राज्य दस कन्याजस्तो हो, जो आ-आफ्नो दियो लिएर दुलहालाई भेट्न निस्के। २ तिनीहरूमध्ये पाँच जना निर्बुद्धि अनि पाँच जना बुद्धिमती थिए। ३ किनकि निर्बुद्धिहरूले आ-आफ्नो दियो लगे तर तेल भने लगेनन्‌। ४ तर बुद्धिमतीहरूले चाहिं दियोसँगसँगै आ-आफ्नो भाँडोमा तेल पनि लगे। ५ दुलहाले बियाँलो गर्दा तिनीहरू सबै निद्राले झुल्न थाले र भुसुक्कै निदाए। ६ अनि मध्यरातमा यस्तो सोर सुनियो: ‘दुलहा आइपुग्नै लागे! तिनलाई भेट्न बाहिर आऊ।’ ७ तब ती सबै कन्याहरू उठे र आ-आफ्नो दियो ठीक पारे। ८ निर्बुद्धिहरूले बुद्धिमतीहरूलाई भने: ‘हामीलाई तिमीहरूको तेल अलिकता देओ न, किनभने हाम्रो दियो निभ्नै आँट्यो।’ ९ बुद्धिमतीहरूले यस्तो जवाफ दिए: ‘तिमीहरूलाई दियौं भने हामीलाई नपुग्ला। बरु तिमीहरू आफै पसलेकहाँ गएर आफ्नो लागि तेल किन।’ १० तिनीहरू पसल जाँदै गर्दा दुलहा आइपुगे र तयार भएर बसेका कन्याहरू विवाह-भोजमा सामेल हुन तिनीसँगै भित्र पसे अनि ढोका बन्द भयो। ११ पछि, बाँकी पाँच कन्या पनि आइपुगे र यसो भन्न थाले: ‘दुलहाराजा, दुलहाराजा, हामीलाई ढोका खोलिदिनुस् न!’ १२ तर तिनले यस्तो जवाफ दिए: ‘म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्छु, मैले तिमीहरूलाई चिनेकै छैन।’ १३ “त्यसकारण जागा रहो, किनकि त्यो दिन र समय तिमीहरूलाई थाह छैन। १४ “स्वर्गको राज्य एक जना मानिसजस्तो हो, जसले परदेश जानुअघि आफ्ना दासहरूलाई बोलायो र आफ्नो सम्पत्ति जिम्मा लगायो। १५ उसले आफ्ना दासहरूको क्षमताअनुसार पहिलोलाई पाँच तोडा,* दोस्रोलाई दुई तोडा अनि तेस्रोलाई एक तोडा चाँदीका सिक्काहरू दियो र परदेशतिर लाग्यो। १६ तब पाँच तोडा पाउने दास तुरुन्तै गयो र त्यसबाट व्यापार गरेर थप पाँच तोडा कमायो। १७ त्यसैगरि दुई तोडा पाउनेले थप दुई तोडा कमायो। १८ तर एक तोडा मात्र पाउने चाहिं आफ्नो बाटो लाग्यो र जमिन खनेर आफ्ना मालिकको चाँदीको पैसा लुकाइराख्यो। १९ “धेरै समयपछि ती दासहरूको मालिक फर्क्यो र तिनीहरूसित हिसाबकिताब माग्यो। २० तब पाँच तोडा पाउने दास थप पाँच तोडा लिएर अगाडि आयो र यसो भन्यो: ‘मालिक, हजुरले मलाई पाँच तोडा दिनुभएको थियो। हेर्नुस्, मैले अरू पाँच तोडा कमाएँ।’ २१ मालिकले उसलाई भन्यो: ‘स्याबास, असल र विश्वासी दास! तिमी थोरै कुरामा विश्वासी भयौ। म तिमीलाई धेरै कुरामाथि नियुक्त गर्नेछु। तिमी आफ्नो मालिकसँगसँगै रमाऊ।’ २२ त्यसपछि दुई तोडा पाउने दास अगाडि आयो र यसो भन्यो: ‘मालिक, हजुरले मलाई दुई तोडा दिनुभएको थियो। हेर्नुस्, मैले अरू दुई तोडा कमाएँ।’ २३ मालिकले उसलाई भन्यो: ‘स्याबास, असल र विश्वासी दास! तिमी थोरै कुरामा विश्वासी भयौ। म तिमीलाई धेरै कुरामाथि नियुक्त गर्नेछु। तिमी आफ्नो मालिकसँगसँगै रमाऊ।’ २४ “अन्तमा, एक तोडा पाउने दास अगाडि आयो र यसो भन्यो: ‘मालिक, तपाईं आफूले नछरेको ठाउँमा कटनी गर्ने र आफूले ननिफनेको अन्न बटुल्ने कठोर मानिस हुनुहुन्छ भनेर मलाई थाह थियो। २५ त्यसैले मलाई डर लाग्यो र गएर तपाईंको तोडा जमिनमुनि लुकाएँ। तपाईंको तोडा तपाईं नै लिनुस्।’ २६ उसको मालिकले यस्तो जवाफ दियो: ‘ए दुष्ट र अल्छे नोकर, म आफूले नछरेको ठाउँमा कटनी गर्ने र आफूले ननिफनेको अन्न बटुल्ने मानिस हुँ भनेर तँलाई थाहै रहेछ, हैन त? २७ त्यसोभए, तैंले मेरो चाँदीको पैसा साहूकहाँ लगेर राखेको भए म फर्कंदा ब्याजसहित त्यो फिर्ता पाउने थिएँ। २८ “ ‘त्यसैले त्यससित भएको तोडा खोसेर दस तोडा हुनेलाई देओ। २९ किनकि हरेक जोसित छ, उसलाई अझै अरू दिइनेछ र ऊसित प्रशस्त हुनेछ तर जोसित छैन, ऊसित भएको पनि खोसिनेछ। ३० अनि त्यो निकम्मा दासलाई बाहिर अन्धकारमा फालिदेओ। त्यहाँ त्यसको रोदन अनि वेदनाको चीत्कार हुनेछ।’ ३१ “जब मानिसको छोरा आफ्नो गौरवसहित सबै स्वर्गदूत लिएर आउँछ, तब ऊ आफ्नो गौरवशाली सिंहासनमा बस्नेछ। ३२ तब उसको सामुन्ने सबै जातिहरू भेला गराइनेछन्‌ अनि गोठालोले बाख्राहरूबाट भेडाहरूलाई छुट्टयाएजस्तै उसले मानिसहरूलाई छुट्टयाउनेछ। ३३ अनि उसले भेडालाई आफ्नो दाहिने हाततिर र बाख्रालाई देब्रे हाततिर राख्नेछ। ३४ “त्यसपछि राजाले आफ्नो दाहिने हाततिर हुनेहरूलाई भन्नेछ: ‘आओ, मेरो बुबाको आशिष्‌ पाएकाहरू हो, संसारको प्रारम्भदेखि* तिमीहरूका लागि तयार पारिएको राज्य अधिकार गर। ३५ किनकि म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई केही खान दियौ; म तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई केही पिउन दियौ। म पराई थिएँ, तिमीहरूले मेरो सत्कार गऱ्यौ; ३६ नाङ्गो थिएँ, तिमीहरूले मलाई लुगा लगाइदियौ। म बिरामी थिएँ, तिमीहरूले मेरो स्याहार गऱ्यौ। म झ्यालखानामा थिएँ, तिमीहरू मलाई भेट्न आयौ।’ ३७ तब परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिसहरूले उसलाई यसो भन्नेछन्‌: ‘हे प्रभु, हामीले तपाईंलाई कहिले भोको देख्यौं र खान दियौं अनि कहिले तिर्खाएको देख्यौं र पिउन दियौं? ३८ हामीले तपाईंलाई कहिले पराई भेट्टायौं र तपाईंको सत्कार गऱ्यौं अनि कहिले नाङ्गो देख्यौं र तपाईंलाई लुगा लगाइदियौं? ३९ हामीले तपाईंलाई कहिले बिरामी वा झ्यालखानामा देख्यौं र तपाईंलाई भेट्न आयौं?’ ४० अनि राजाले तिनीहरूलाई यस्तो जवाफ दिनेछ: ‘म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानालाई जे-जति गऱ्यौ, त्यो तिमीहरूले मलाई नै गऱ्यौ।’ ४१ “त्यसपछि उसले आफ्नो देब्रे हाततिर हुनेहरूलाई भन्नेछ: ‘हे श्रापितहरू हो, मबाट पर हटिहाल र सधैं बलिरहने आगोमा जाओ, जो दियाबल र त्यसका दूतहरूका लागि तयार पारिएको छ। ४२ किनकि म भोकाएको थिएँ तर तिमीहरूले मलाई केही खान दिएनौ; म तिर्खाएको थिएँ तर तिमीहरूले मलाई केही पिउन दिएनौ। ४३ म पराई थिएँ तर तिमीहरूले मेरो सत्कार गरेनौ; नाङ्गो थिएँ तर तिमीहरूले मलाई लुगा लगाइदिएनौ; बिरामी थिएँ र झ्यालखानामा थिएँ तर तिमीहरूले मेरो स्याहार गरेनौ।’ ४४ तब तिनीहरूले पनि यसो भन्नेछन्‌: ‘हे प्रभु, हामीले तपाईंलाई कहिले भोको वा तिर्खाएको वा पराई वा नाङ्गो वा बिरामी वा झ्यालखानामा देख्यौं र पनि तपाईंको सेवा गरेनौं?’ ४५ अनि उसले तिनीहरूलाई यस्तो जवाफ दिनेछ: ‘म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, तिमीहरूले यी सबैभन्दा सानाहरूमध्ये एक जनालाई जे-जति गरेनौ, त्यो तिमीहरूले मलाई नै गरेनौ।’ ४६ अनि यिनीहरू सधैंका लागि नाश हुनेछन्‌ तर परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिसहरूले भने अनन्त जीवन पाउनेछन्‌।”
^ मत्ती २५:१५ * “तोडा।” ग्रीकमा टालेन्टोन। पाँच तोडा तौलमा लगभग १०० किलो चाँदीका सिक्काहरू हुन्थ्यो। मत्ती १८:२४ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मत्ती २५:३४ * शाब्दिक, “बीउ फ्याँकेदेखि।” यसले आदम र हव्वाको सन्तान गर्भमा आउनुलाई बुझाउँछ।